Imisebenzi eyi-30 yokuHlawula ngokuBalaseleyo kuFundo eMelika ngo-2021 yoHlaziyo: Iindaba zeSikolo sangoku
Iindaba zangoku zeSikolo
Elona Ziko lokuPhononongwa kwezeMfundo liBaliwe, Isikhokelo soViwo kunye neMfundo, ukuHola kweMisebenzi ePhakamileyo kunye neWebhusayithi yeScholarship
ZONKE IZINTO ZEPROJEKTHI
Iintengiso! Ukufumana ukungena kwamanqanaba angama-200 ekufundeni nayiphi na ikhosi kuyo nayiphi na iYunivesithi oyikhethile nge-IJMB / JUPEB. AKUKHO JAMB | IMirhumo ephantsi. Ubhaliso luyaqhubeka. Tsalela umnxeba ku-07063900993 NGOKU!
Imisebenzi eyi-30 yokuHlawula ngokuBalaseleyo kwabaPhumeleleyo eMelika ngo-2021 yoHlaziyo
Kufakwe kuyo Education by Abasebenzi bokuhlela ngoJuni 18, 2021
Iintengiso! Khuphela iJAMB CBT Software ngoku mahala!
Apha ngezantsi luluhlu lwemisebenzi ehlawulwa kakhulu kwabafundi abaphumeleleyo eMelika. Ngokwengxelo yakutshanje yeGlassdoor.com, oogqirha kunye negqwetha lendawo yengingqi isengabasebenzi abarhola kakhulu kweli lizwe. Ukujonga oku, amakhondo ezonyango kunye nomthetho kubonakala ngathi kunenzuzo enkulu ngokwezezimali. Fumana iinkcukacha ezingezantsi.
Ukuqulunqa uluhlu lwayo Eyona misebenzi mihle yokuBhatala abagqwesileyo eMelika ngo-2021, iwebhusayithi yahlalutya idatha engaziwayo yemivuzo evela kubasebenzisi bayo.
Ukuze isikhundla somsebenzi sibekhona kuluhlu, bekukho iingxelo ezingamashumi asixhenxe anesihlanu ngomsebenzi ongenisiweyo kunyaka ophelileyo. Imisebenzi yenqanaba le-C ayifakwanga kwingxelo.
Imisebenzi ehlawulelwa ngokugqibeleleyo kwabafundi abaphumeleleyo
Nantsi imisebenzi ehlawula kakhulu emashumi mathathu, esekwe kuluhlu ngu Iglasi yangaphandle.com:
Nceda uqaphele ukuba imivuzo yimivuzo ngonyaka.
Umyinge wemivuzo: $ 180,000
Okokuqala kuluhlu lwethu lwemisebenzi ehlawulwa kakhulu kwabafundi. Iyeza ayinguwo nje umsebenzi ohlawula kakhulu ngaphakathi e-US, ukugaywa kunye nemfuno yoogqirha bezonyango kuqikelelwa ukuba iphucule kwi-14% ukusuka ngo-2014 ukuya ku-2024.
Oku kukuphindwe kabini kunomyinge oqikelelweyo kuyo yonke imisebenzi, njengoko kuchaziwe yi-Bureau of Labor Statistics.
Umyinge wemivuzo: $ 144,500
Okwesibini, kuluhlu lwethu lwemisebenzi ehlawulwa kakhulu kwabafundi abaphumeleleyo Ngelixa umvuzo uza kwahluka ngokwesebe lomthetho ophambili kulo. Umndilili womvuzo ubaluleke ngokwaneleyo ukwenza umthetho ube ngowona msebenzi uhlawulwa okwesibini eMelika. Okungakumbi, iphepha lodweliso lomsebenzi leGlassdoor libonisa malunga nokuvula okungama-9,000 lo msebenzi.
3. Mnumzana R & D
Umyinge wemivuzo: $ 142,120
Abaphathi bophando kunye nophuhliso banwenwele kwindima exhomekeke kwinkokeli, ukusuka kwisitayile semveliso kunye nokukhokelela kubambiswano olutsha lokongamela abasebenzi.
4. Umphathi woPhuhliso lweNkqubo yeeKhompyutha
Umyinge wemivuzo: $ 132,000.
Ngokuqinisekileyo le yeyona misebenzi ihlawula kakhulu abafundi abaphumeleleyo. A Umphathi wophuhliso lwenkqubo yekhompyuter phuhlisa kwaye ihlole inkqubo yeenkqubo zekhompyuter. Ithuba lalo msebenzi liqaqambile; Kuqikelelwa ukuba kukhula ngo-2014 ukuya ku-2024.
5. Umphathi wekhemesti
Umyinge wemivuzo: $ 130,000
Iminyaka yobungcali ukongeza kwi-Ph.D iyafuneka kakhulu. Oosokhemesti kulindeleke ukuba babenakho oku.
6. UMphathi weQhinga
Lo ngomnye wemisebenzi ekhulayo yokuhlawula abona baphumeleleyo. Abaphathi beqhinga bahlala belawula izicwangciso zenkampani zokuphuhlisa ubudlelwane, ukuqhuba ukukhula kunye nokuqalisa amanyathelo amatsha okuqhuba ngenzuzo. Idigri iyafuneka, kwaye abaqeshi abambalwa badinga inkosi, uluhlu lweGlassdoor lubonisiwe.
7. UMyili weNkqubo yeKhompyutha
Umyinge wemivuzo: $ 128,250
Abayili beenkqubo zekhompyuter bavelisa iinkqubo kwaye banxibelelana nezicwangciso zobugcisa kwiinkokheli zenkampani. I-bachelor ye-degree degree yesayensi ngamanye amaxesha iyafuneka.
8. Injineli yoYilo lweSekethe yeKhompyuter
Umyinge wemivuzo: $ 127,500
Iinjineli zoyilo lweekhompyuter zinika uyilo lombane kunye nenkxaso yophuhliso kunye nokusombulula imiba yezixhobo zobuchwephesha. Ukuba ne-B.Sc. okanye iM.Sc kubuNjineli boMbane yindawo eqhelekileyo.
9. Umphathi weTekhnoloji yoLwazi
Umyinge wemivuzo: $ 120,000
Abaphathi betekhnoloji yoLwazi baqinisekisa ukuba nganye yezixhobo zenkampani, iinkqubo zekhompyuter, kunye neenethiwekhi zisebenza ngokudada kwaye ziphumeza iinjongo ze-IT zombutho. Ngamanye amaxesha abaphathi be-IT banesidanga kwicandelo elongezwe kwizakhono ezininzi zobugcisa.
10. UMyili weSisombululo
Izisombululo zezakhiwo zikhokelela okanye zenze lula isitayile seemveliso kunye nemisebenzi. Nangona kunjalo, ikakhulu baxhalabile ngemiba yobuchwephesha yokwenza. Iirikhwizishini zemfundo ziyahluka, ukuqala ukusuka kwinqanaba kwiKhompyuter yeNzululwazi okanye kwiinkqubo ze-IT ukuya kwinkosi yentengiso okanye yobunjineli.
11. Umphathi woThethathethwano
Banoxanduva lobudlelwane babathengi. Indima idinga izakhono ekuthengiseni nasekulawuleni iiprojekthi. Inkqubo okanye izakhono zobugcisa zinokuba luncedo.
12. Umphathi Wezicelo
Aba baphathi bajongana nokuphucula iinkqubo zangaphakathi kunye nekhowudi yekhompyuter. Kufuneka isidanga kunye nenani leminyaka yobungcali ebaleni.
Umyinge wemivuzo: $ 118,000
Oosokhemesti bafumana imivuzo elungileyo. Nangona kunjalo, baya kuba neeyure ezinde kwaye kulindeleke ukuba basebenze kwiishifti zeempelaveki. Ukuba nesidanga sobugqirha kuyafuneka.
14. UMyili wenkqubo
Umyinge wemivuzo: $ 116,920
Aba bayili bakha kwaye bagcina iziseko zedatha zenkampani, usetyenziso lweenkqubo, kunye neenkqubo. I-bachelor's degree okanye i-degree degree kwizobunjineli, isayensi yesicelo, okanye intsimi edibeneyo iyadingeka.
15. Umphathi wezeMali
Umyinge wemivuzo: $ 115,000
Ngokwesiqhelo bane-5 okanye iminyaka emininzi yobungcali kwezezimali, ezobalo-mali, okanye umhlaba oxhunyiwe, ukongeza kwinqanaba.
16. Umhlalutyi weDatha
Ikhompyuter kunye nohlalutyo lolwazi zisombulula imiba ephambili kwikhompyuter. Ingqesho yalo msebenzi kulindeleke ukuba inyuse iipesenti ezilishumi elinanye ukusuka ngo-2014 ukuya ku-2024, okhawulezayo kunesiqhelo.
17. Umphathi weengozi
Abaphathi bomngcipheko balwela i-inshurensi, uxanduva, kunye nokuthotyelwa komthetho. Ukusebenza kunye neemfuno zemfundo ziyahluka kakhulu, ukubheja kwishishini.
18. UMququzeleli woBuchule
Abalawuli bokudala benza amanyathelo okuthengisa amatsha entlangano, ekhokelela kubukulwa kunye nesitayile. iimfuno zomsebenzi ziyahluka, nangona kunjalo imemo yobunkokeli iyanceda.
Iiarhente zobuntlola ezi-17 eziManyeneyo eMelika
Iimfuneko zokuQinisekiswa kweMfundo yaBantwana aBasaqalayo
Uliqala njani iShishini lokuThengisa iiNdawo eMini eNigeria nelayisensi
Izizathu zokuba abafundi bafanele bafumane isidanga kwiziko leMfundo kwi-Intanethi
Iindlela ezingama-30 ezizodwa zokwenza imali eMzantsi Afrika ngo-2018
19. Indawo yokuhlala
Amachiza Hlalutya umngcipheko wemali kunye nokungaqiniseki. Ukuqeshwa kwe-actuaries kulindeleke ukuba kukhule i-pc elishumi elinesibhozo ukusuka kwi-2014 ukuya kwi-2024, i-BLS ithi.
20. UMcwangcisi woLwazi
Umyinge wemivuzo: $ 113,000
Idatha yoyilo ivelisa ulwazi kunye netekhnoloji yeemephu zendlela zombutho. Isikhundla sihlala sifuna izakhono zobugcisa kunye / okanye i-BS kwisayensi esetyenzisiweyo okanye iinkqubo zolwazi.
21. UMphathi weRhafu
Umyinge wemivuzo: $ 110,000
Abaphathi berhafu balungiselela imbuyekezo yerhafu yombuso kunye neyorhulumente kubantu nakumashishini. Nxulumana nendoda ekholeji yobuhlengikazi okanye isidanga kwi-accounting iyafuneka.
22. Umphathi weMveliso
Umyinge wemivuzo: $ 107,000
Aba baphathi babalulekile kwiqela lokuphuhlisa imveliso, basebenza ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezintsha zifumaneka ngexesha. Kukho ngaphezu kwe-7,000 yokunikezelwa kwemisebenzi kwesi sikhundla.
Umyinge wemivuzo: $ 106,500
Icandelo labaphathi loyilo elinoxanduva lokujonga imifanekiso yengqondo kunye nesohlwayo senkunzi kumxhasi okanye kubuchwephesha kubathengi. Imisebenzi iyahluka ngokubanzi kumashishini.
24. Umphathi wohlalutyo
Umyinge wemivuzo: $ 106,000
Lo msebenzi ufuna amava kubalo kunye nohlalutyo lolwazi. Esi sikhundla sinamawaka okuvuleka kwemisebenzi.
25. UMPHATHI WENKQUBO YENGCACISO.
Le ndima ibanzi ngokwembopheleleko. Abaphathi bezixhobo bajonga ulwazi lwalo naluphi na uhlobo kwifemu.
26. Iingcali zengqondo
Umyinge wemivuzo: $ 95,710
Kuqikelelwa ukuba ikhula nge-9 pesenti.
27. Uhlalutyo loKhuseleko lweDatha
Umyinge wemivuzo: $ 92,600
Ukukhuseleka kuninzi okuyimfuneko kunangaphambili. Umyinge wokukhula kweepesenti ze-10.
28. Umcebisi wezeMali
Umyinge wemivuzo: $ 90,530
29. Umphathi Wezokwakha
Umyinge wemivuzo: $ 89,300
30. Ugqirha wezilwanyana
Umyinge wemivuzo: $ 88,770
Yintoni oyithathayo kule nto? Siyakholelwa ukuba eli nqaku beliluncedo, ukuba ewe, ungathandabuzi ukwaba olu lwazi nabahlobo bakho kuFacebook, kuTwitter, kuWhatsapp, nakuGoogle plus.
Faka Idilesi yakho yemeyile:
Ukukhutshwa ngu I-TMLT NIGERIA
Joyina abafundi abangaphezulu kwama-3,500 000 XNUMX+ abakwi-Intanethi ngoku!
=> SISISEKILE Instagram | FACEBOOK & twitter Uhlaziyo lwamva nje
=> XOXA NOKUMELWA KWAKHO NGOKU
AIDS: QINISEKA KWISIKHUKHULA KWIINTSUKU EZI-60! -OYALELA YAKHO APHA
COPYRIGHT Isilumkiso! Umxholo kule webhusayithi awunakuphinda upapashwe, uphinde uveliswe, uphinde usasazwe uphelele okanye uyinxalenye ngaphandle kwemvume efanelekileyo okanye ukwamkelwa. Yonke imixholo ikhuselwe yi-DMCA.
Umxholo kule ndawo uposwe ngeenjongo ezilungileyo. Ukuba ungumnikazi wale mxholo kwaye ukholelwa ukuba ilungelo lakho lokushicilela laphulwe okanye laphulwa, qiniseka ukuba unxibelelana nathi ku [[imeyile ikhuselwe]ukufaka ifayile yesikhalazo kwaye amanyathelo aya kuthathwa kwangoko.
Imisebenzi ephezulu yokuhlawula eNigeria 2021 Bona uhlaziyo lwamva nje
Imisebenzi ehlawulwa kakhulu eMelika yaBafundi ngo-2021
ImiSebenzi eyi-50 yokuHlawula ngokuBalaseleyo ngesiGanga seBachelor kuphela kwi-2020
Kuthatha ixesha elingakanani ukuvuselela ikhadi eliluhlaza?
Faka isicelo ngoku kwiNigeyali yokuPhathwa kweNkampani yokuHamba kweNqwelo moya ePlc yeSithuba sikaNobhala wenkampani
Isikhokelo seFomu yesicelo seVisa yaseLuxembourg kunye neemfuno
Iinkcukacha zokuVavanywa koKwamkelwa koKwamkelwa kwaBafundi okwangezelelweyo ngo-2016/17
tags: imisebenzi ehlawulwa kakhulu kwihlabathi 2021, Imisebenzi ehlawulwa kakhulu e-usa 2021, imisebenzi ehlawulwa kakhulu ngaphandle kwesidanga, imisebenzi ehlawulwa kakhulu kwihlabathi 2020, imisebenzi ephezulu ye-100 ephezulu
I-URL yokulandelela | Izimvo RSS feed
Julayi 27, 2018 kwi-10: 04 pm
Kubonakala ngathi eli nqaku lenzelwe mna
« Iinkcukacha eziNgcono ngeeNqwelomoya zeeNqwelo moya zaseNigeria-ezasekhaya nakwamanye amazwe
Isisombululo seNgxaki sisisombululo, jonga isikhokelo ngenyathelo nenyathelo kunye nomzekelo »
Nge-2021ti kaJulayi ka-XNUMX oDade oMnandi woSuku lokuzalwa kunye neMiyalezo yokuBakhuthaza
www.immigration.gov.ng/recruitment form 2021 Uhlaziyo lwee Portal
www.nouonline.net iziphumo: Isitshixo seSizwe esivulekileyo seSiphumo sokuKhangela i2021
NgoJulayi 2021 Ukuloba iminqweno elungileyo yasekuseni kunye nokubhaliweyo ukuze uqalise usuku lwakho
Ukuqeshwa kweBhanki eChartered 2021/2022 Ifom yesicelo
I-Standard Chartered Bank yaseNigeria yokuGaya iPortal 2021 www.sc.com
INkqubo yeZizwe eziManyeneyo yokuTya iNkqubo yokuTya 2021/2022 Ifom yesicelo seFortal
INkqubo yeZizwe eziManyeneyo yezoKutya kwiJob Portal 2021 www1.wfp.org
I-Masters kaRhulumente waseColombia kunye ne-PhD Scholarship 2021/2022 yohlaziyo
Vanier Canada Graduate Scholarship 2021 yaBafundi abaDala
I-Undergraduate Global Excellence Scholarship kwiYunivesithi yase-Exeter 2021
Ngaba uJeff Bezos usesibhakabhakeni ngoku? ukusuka eAmazon ukuya kwiNASA
Faka isicelo ngoku kwi-ExxonMobil Graduate Recruitment 2021 Updates
NgoJulayi 2021 Iminqweno yokuzalwa emnandi, Imiyalezo kunye noQikelelo
Ukuqeshwa kwakhona kwe-ExxonMobil 2021/2022 Jonga ukuHlaziywa kwesicelo sokuNgena
Ukuqeshwa kwe-ExxonMobil eNigeria 2021/2022 Uhlaziyo lwesicelo samva nje
I-ExxonMobil Portal yokugaya abaFundayo 2021 www.corporate.exxonmobil.com
Ukuhlaziywa kwamapolisa eNigeria eNgcaciso yoQeqesho kwi-2021
Ukuqashwa kwe-DPR www.dpr.gov.ng 2021/2022 Ifom yesicelo seFortal
IFomu yokwamkelwa kwabafundi kwi-UNIUYO SCE ye-2021/2022 yeSeshoni yeziFundo
© 2021 Iindaba zangoku zeSikolo. Onke Amalungelo Agciniwe..